प्रेमीकाले धोका दिए पछि इटहरीका राजेशले सप्तकोशीमा हा”म फा’ले, बचाउन खोज्दा नि अस्वीकार गरे ! – " सुलभ खबर "
प्रेमीकाले धोका दिए पछि इटहरीका राजेशले सप्तकोशीमा हा”म फा’ले, बचाउन खोज्दा नि अस्वीकार गरे !
१० वर्ष लामो प्रेम सम्बन्ध सफल नभएका कारण कोशी नदिमा हाम फालेर एक युवाले ज्या न फालेका छन् । नदिमा हा”’म फालेपछि ति युवकलाई स्थनियले देखे । उनी पानीमा छ”टप”टा”उँदै थिए तत्काल चतरा बराह रिसोर्ट सेन्टरका कर्मचारी र संचालक वोट लिएर उनलाई
बचाउन गए ।इटहरी निवासी राजेश वानिया आफ्नो असफल प्रेम सम्बन्धका कारण देह त्याग गरेका हुन् । उनलाई बचाउन वोट लिएर गएकाहरुले नदिमा पुगेर उनलाई माथि आउन आग्रह गर्दै बाँस समाउन दिए । तर उनी त्यती बेला पनि बाँच्न चाहेनन् । बचाउन गएकाले समाउन दिएको बाँस पनि समातेनन् । अन्तमा उनले देह त्याग गरे ।
त्यतीन्जेल निकै ढिलो भइसकेको थियो । अहिले उनलाई बगाएर कहाँ पुर्यायो खोज्दा समेत फेला पर्न सकेका छैनन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा प्रेमीकाको अर्कै युवकसंग फुलमाला भएको तस्बिर देखेपछि उनले त्यो पीडा सहन सकेनन् । घरमा खाना नखाई बस्न थाले, अनि सामाजिक सञ्जालमा निकै लामो स्टाटस लेखे ।उनले लेखेको त्यो स्टाटस देखेर परिवारका सदस्य चिन्तित भए । उनी एक छिन बजार जान्छु
भनेर घरवाट बाहिर निस्के । अनि कोशीमा आएर हा”’मफाले । युवाको दिदीले युवतीको परिवारवाट निकै दवाव आएर आफ्नो भाईसंग विवाह गर्न नमान्दा धोका दिएको भन्ने आफुले सुनेको बताएकी छन् ।सुनसरीको वराहको चतरा स्थित कोशीमा हा”मफाले”का हुन् । इटहरी निवासी राजेश वानियाले आफ्नो १० वर्ष लामो प्रेम जिवन सफल हुन नसकेको भन्ने स्टाटस लेखेर कोशीमा हामफालेका हुन् ।
अहिले सम्म उनलाई फेला पार्न सकिएको छैन । असफल प्रेम सम्बन्ध सफल हुन नसकेका कारण अब केही घण्टामा म मेरो जिवन त्याग गर्दैछु भनेर फेसवुकमा पनि लेखेका थिए । त्यस्तो स्टाटस लेखेको देखेपछि परिवारका सदस्यले उनलाई निकै सम्झाए । उनको दिदी गायत्री भण्डारी जसले उनलाई बच्चा अवस्था देखि नै तिहारमा टिका लगाउँदै आएको बताइन् । ति युवा आफ्नो फुपुको छोरा भएको उनले बताइन् ।
उनले आफ्नो दिदीलाई पनि प्रेम सम्बन्धका बारेमा पनि बताएका थिए । उनले ९ वर्ष देखि नै भाईको प्रेम भएको बारे थाहा पाएको बताइन् । राजेश आफ्नो प्रेमिकाको गाउँमै पुगेर त्यहाँको कोशी नदिमा हा”मफा”लेका हुन् ।